I-Majague Lodge (Ikhabethe labantu abangu-6)
Usulután Department, i-El Salvador
Ikamelo e-i-lodge ibungazwe ngu-Joel
I-Majague Lodge, iyindawo yokucasha ephambi kolwandle oluhle lwase-El Majague. Izungezwe izingadi ezinhle zezitshalo zasezindaweni ezishisayo nezihlahla zesundu, iKhabhinethi yethu yomklamo okhethekile ihlangana ngaphandle komthungo nezakhi ze-rustic, ukuze ujabulele ngokunethezeka okukhulu nomndeni wakho nabangane.
Phila isipiliyoni esigcwele ukuthula mayelana nemvelo nolwandle, vuka njalo ekuseni ulalele izingoma zezinyoni futhi ulalele amagagasi akugcwalisa ngokuthula. Amakhabethe ethu athokomele futhi anethezekile anomklamo ovumelana nemvelo, owakhiwe ngokhuni olubuyiselwe olunikeza imininingwane eyingqayizivele, azokwenza uphile okuhlangenwe nakho kolwandle okuqaphelayo nendawo yemvelo.
Ikhabethe ngalinye lithembisa indawo esondelene enemibono emihle yechweba lolwandle. Bonke banompheme ozimele owenziwe ngokhuni, indawo yokugezela yangasese, isiphephetha-moya kanye nedamu langasese elinombono ohlaba umxhwele wezinkanyezi nalapho ungezwa khona ingoma yamapharakethi anezidleke zawo emhlumeni ... Kafushane, wena ngeke skimp e bayozijabulisa e seduze nendalo. Ngokunaka okukhulu kwemininingwane kanye nesilungiselelo esithandekayo, amakhabethe ethu afakwe imibhede yosayizi wendlovukazi e-ergonomic, amathawula omzimba, amatafula okhuni nezihlalo, i-Wi-Fi yamahhala ezikhungweni kanye ne-cable TV ekhabetheni.
Imibhede emikhulu engu-3
Sisemphakathini wabantu bendawo abazinikele ekudobeni ngezandla.